Wadahadalka fanka ee dagaalka loo geystay dadweynaha, Afrika waa qaraabo sabool ah. Maqnaanshahan waxaa si macquul ah loola xiriirin karaa aqoon la'aanta buugta maadada ee Afrika. Xaaladdani way ka duwan tahay kuwa Europe iyo Aasiya. Dalalkaas waxaa si fiican loo yaqaan tusaale ahaan buugyada Clausewitz, Machiavelli ama Sun Tzu.
Qeexitaan kale ayaa ka hadlaya guulaha Afrika ee dhifka ah ee ka dhanka ah awoodaha gumeysiga Yurub. Ugu dambeyntii, ka feker sawirka madaw Afrikaan ah sida maskax la'aan maskax ahaan loo yaqaan qarniyadii hore. Marwalba marwalba marwalba shahaadad gaar ah ayey mar walba joogtaa miyir la'aanta. Taasina si fiican uma fiicnayn kuwa istaraatiijiyadeed ee militariga, awood u leh inay ka sara mariyaan yurubiyaanka aaggaas. Nasiib wanaag, markhaati daacad ah oo daacad ah ayaa ka doodi kara fikradda la helay.
Sannadkii 1960-kii, waxaa lagu soo waramayaa in uu ka mid yahay wadamada reer galbeedka ee ku yaala waqooyiga Angola. Wuxuu caan ku yahay inuu hogaaminayo NTINGAZ CASE (16-17).
Nzinga waxaa sameeyay Lesliana Pereira ee Njinga, Rainha De Angola (2014)
Farshaxanka dagaalka Ndongo
Elias Alexandre Da Silva Corrêa waa khabiir ku xeel dheer dagaalka. Wuxuu joogaa Angola dhammaadka qarnigii XNIXX. Sida laga soo xigtay qoraaga taariikh taariikhda Angola, farshaxanka dagaalka gobolka wuxuu lahaa isla saameyntii kan Prussian Frederick the Great (18-1712). Xusuus-qorkan ayaa si gaar ah u jilicsan. Runtii, Frederick II waa mid ka mid ah moodooyinka qoraaga Carl von Clausewitz ee qoraagii heshiiska milatariga 'De la Guerre'. Frederick II sidoo kale wuxuu ahaa qoraaga filashooyinka waaweyn xilligii loogu magac daray Dagaalkii Toddobaadkii. Hadallada Correa, waxay u badan tahay inay ku habboon tahay xilligii boqortooyada Ndongo (1786ème-16ème siècle), si kastaba ha ahaatee waxay sii ahaatay qarni ka dib.
Laakiin doodda casriga ahi waxay muujinaysaa waxtarka farshaxanka dagaal ee Mbundu. Sida laga soo xigtay taariikhyahan John Thornton, Ndongo qaabka dagaalku wuxuu ahaa mid aad wax ku ool ah, mar markaasi, macalimiintii reer Portugal waxay isticmaaleen qaabab xeeldheer iyo habdhismeed. Sida laga soo xigtay mid ka mid ah, Dutch-ka ma sii wadi karin joogitaankooda gobolka haddii aysan sidaas sameynin. Laakiin maxay ahayd ururkii millatariga ee Ndongo, xeeladaha iyo xeeladaha?
Ndongo wuxuu lahaa ciidan xirfad leh oo dhowr kun oo askari ah, inta u dhaxaysa 10 iyo 20. Xaaladaha degdegga ah, waxaa laga yaabaa in ay ku darsadaan kuwa kaydka ah kuwaas oo kaalintooda ahayd inay bixiyaan taageero sahay ah oo loogu talagalay askarta aqoonta leh.
Intaa waxaa dheer, askartii xirfadlayaasha ahaa waxay si gaar ah u lahaayeen xirfad khaas ah oo gacanta ku haya meelo gaaban oo gaaban oo ka soo jeeda gumeysi, fiilooyin ama ciriiri, iyo xataa naadiyo. Waxaa sidoo kale loo tababaray in ay xakameeyaan qaansada iyo feerka ay isticmaalaan masaafo dheer. Kadib soo bandhigida qoryaha yurubiyaanka, waxaa loo isticmaalay in lagu badalo godadka.
Xeeladaha iyo xeeladaha
Askarta Mbundu waxay bilaabeen dagaalka si ay u bilaabaan, marka la eego qiyaasta dheer, hal ama laba fallaadho ama dab qafiif ah ka hor inta aysan ka qayb galin qaybta ugu muhiimsan ee dagaalka iyada oo la adeegsanayo hubka gaaban.
Njinga ayaa ku mashquulsan dadka yurubiyaanka ah iyagoo gaaban oo ku yaala Njinga, Rainha de Angola (2014)
Ciidamada Mbundu waxaa lagu abaabulay qaybo yar yar laakiin waa isku xirnaan. Sababtoo ah waxay ku faafinayaan muuqaal ahaanshaha meel bannaan, waxay ka qaadeen meelo badan. Sidan oo kale, waxay muujiyeen in dareenka Yurub uu ka muhiimsan yahay dhab ahaantii. Waxaa intaa dheer, qaab-dhismeedkooda muuqda waxay khiyaaneeyeen kacdoonka yurubiyaanka oo u maleeyay in uu la macaamilay koox ka kooban dagaalyahanno unugsan.
Xaqiiqdii, xeeladaha kala duwan ayaa si madax-bannaan u maamula qayb kasta oo ka mid ah qaybaha yaryar ee wareega. Mid kasta waxaa hogaaminayey maamulaha. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, way isku dari karaan inay ka jawaabaan amarrada hal qof oo keliya. Sida weerarradooda, waxay caadi ahaan ka koobanyihiin iskudhacyo yaryar ka hor inta aanay dib u soo celin haddii loo baahdo. Sidaa daraadeed, ciidanka Ndongo ayaa laga yaabaa inay carqaladeeyaan cadowga isla markaana dib u soo celiyaan maalmo wanaagsan oo dib loo habeeyay, oo diyaar u ah inay dib u weeraraan.
buugaag : John K. Thornton / askari Afrika ah oo ku jira kacdoonka Haiti & John K. Thornton / Farshaxanka Dagaalka ee Angola, 1575-1680
Kacaanka Haitian: saddex eray iyo farxad. Falalka geesinimadu maaha mid kale; kacaankii Haiti waa dhacdo dhexe ee taariikhda Afrika, dagaal our ugu weyn ee xoraynta, "Tani waa sannadood 13 ah, sixitaanka iyo bilowgii iftiinka ku dhex gubo madow ah, taas oo aan doonaa hadal
Mareykanka: Waa maxay istiraatiijiyad loo adeegsanayo dadka madow si ay uga hortagaan nidaamka addoonsiga nostalgic? Markii laqabqabtay xasuuqii, ayaa Mareykanku ku guuldareystay inuu soo afjaro kala sooca midab-kala-sooca "Waa ay hadda dib u dejiyeen"
Oct01 03: 35